प्रतिकूल बेलामा आम आत्महत्याको उक्साहट
मुख्य पृष्ठकन्टिर-दृष्टिप्रतिकूल बेलामा आम आत्महत्याको उक्साहट
आइतबार, ०२ फागुन, २०७७ 0प्रतिक्रिया
अहिले गाउँ, नगर, टोल, गल्ली, हाट–बजार, चोक–चौराहा जताततै मानिसको खुलेआम भिड देख्दा कन्टिर–बाबू दङ्गदास छन् । अझै खुला आमसभा र विरोध प्रदर्शनको त कुरै बुझी नसक्नु छ, सङ्ख्या गनी नसक्नु छ । त्यसमा पनि सडकमा मानिस उतार्ने दलीय प्रतिस्पर्धा– बाप रे बाप !
कन्टिर–बाबू दाहिने हातले चस्माको डन्डी मिलाउँदै सोचमग्न छन् । उनी प्रश्न गर्छन्– आखिर यस्तो अनुत्पादक प्रतिस्पर्धा र भिडमा मानिस कसरी निर्धक्क सहभागी हुन सकेका हुन् ? के कोरोना सङ्क्रमणको त्रास सकिएकै हो ? जन–स्वास्थ्यजस्तो गम्भीर विषयमा सरकार किन जिम्मेबार बन्न चाहिरहेको छैन ?
के सबैले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाइसके ? खोप नै लगाए पनि त्यसको प्रभावकारिता कति छ ? कि भेलामा सहभागी सबैले बेसार पानी खाएर आएका हुन् ? यदि खाएका हुन्थे भने बजारमा बेसारको भाउ छुनै नसकिने गरी आकासिनुपर्थ्यो । सडकमा आउने मान्छेहरूको सङ्ख्या यति छ कि बेसार आयात गरे पनि माग कम हुने देखिन्न ।
बेलायत, अफ्रिका, जापानलगायत देशमा देखापरेको नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस सङ्क्रमण दरको गति र हिसाब थाहा छ कि नाइँ सरकारलाई ? फेरि भिडमा देखिएका अधिकतर अनुहार खोप लगाउने सरकारी प्राथमिकतामा नपरेकाहरू भएको कन्टिर–बाबूलाई जानकारी छ ।
अचम्म त के छ भने, असुरक्षित तरिकाले सडकमा मानिसको हुल उतार्ने प्रतिस्पर्धामा सरकार सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । यही हो जो अगुवा उही बाटो फोहोर गरुवाको असली बिम्ब–चित्र । सरकारले त जनतालाई असुरक्षित तरिकाले सडकमा ननिस्किनुहोला, भिडमा नजानुहोला, भौतिक दूरीकोको नियम पालन गर्नुहोला भनेर भन्नुपर्नेमा उल्टै जनतालाई बढीभन्दा बढी भिड भएर देखाउन उक्साउँछ सरकार, त्यसैको कपि–पेस्ट गर्छन् दलहरू । के यो प्रतिकूल बेलामा आम आत्महत्याका लागि भएको उक्साहट होइन ?
कोभिडको रोकथामका लागि जारी गरिएको हेल्थ प्रोटोकलमा २५ जनाभन्दा बढी मानिस एकै ठाउँमा भेला हुन नपाउने उल्लेख छ । यो नियम सरकारले कहिले खारेज गरेछ ? कन्टिर–बाबूले थाहा पाएका छैनन् । कसैलाई यसबारे जानकारी छ भने कन्टिर–बाबूलाई जानकारी दिउँ है !
आत्महत्या खुलेआम प्रोटोकल
सबमा समस्यै–समस्या, अभावै–अभाव !
जमुरेगिरीको अन्त्य र नयाँ खेलको प्रतीक्षा